Nandà ny fidiran'ny mpandeha avy any Brezila, India, Afrika atsimo ary UK i St. Kitts & Nevis
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Saint Kitts sy Nevis Breaking News » Nandà ny fidiran'ny mpandeha avy any Brezila, India, Afrika atsimo ary UK i St. Kitts & Nevis
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Saint Kitts sy Nevis Breaking News • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
St. Kitts & Nevis dia manavao ny toro-làlana momba ny dia ho an'ireo mpitsidika avy any Brezila, India, Afrika atsimo ary United Kingdom.
St. Kitts & Nevis dia handà ny fidiran'ny mpandeha avy any Brezila, India, Afrika atsimo ary UK.
Nanitatra hatramin'ny 31 Aogositra 2021 ny torohevitra momba ny dia.
St. Kitts & Nevis dia nanitatra ny toro-hevitra momba ny dia ho an'ireo mpandeha tonga avy any UK, Brezila, India ary Afrika atsimo hatramin'ny 19 Jolay 2021 hatramin'ny 31 Aogositra 2021. Ireo olona avy amin'ireo toerana voalaza etsy ambony dia nanoro hevitra ny tsy handeha ho any St. Kitts & Nevis amin'izao fotoana izao. Holavina ny fidirana ao amin'ny Federasiona. Ny olom-pirenena sy ny mponina ao St. Kitts & Nevis izay tonga avy amin'ireo firenena ireo dia tsy maintsy manodina ny fangatahan'izy ireo amin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera www.knatravelform.kn.
Ireo izay vita vaksiny tanteraka mandritra ny tapa-bolana na mahery alohan'ny fahatongavany dia takiana amin'ny quarantine mandritra ny efatra (4) andro aorian'ny hahatongavany ary miandry ny fanandramana ratsy RT-PCR notontosaina tamin'ny andro fahefatra (4), alohan'ny hamoahana azy ireo fanokana-toerana. Ireo olom-pirenena sy mponina izay mbola tsy nanao vaksiny feno nandritra ny tapa-bolana talohan'ny nahatongavan'izy ireo dia takiana am-pakan-kery mandritra ny 14 andro rehefa tonga.
Ny fanapaha-kevitra hanitatra ny mpanolo-tsaina dia miorina amin'ny toro-hevitra avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana ary napetraky ny Governemanta St. Kitts & Nevis tamin'ny alàlan'ny National Task Force COVID-19 ho fiarovana ny sisin-tany sy ny fahasalaman'ny olom-pireneny. Manitatra ny mpanolo-tsaina ny governemanta ho valin'ny fiovan'ny COVID-19 izay nipoitra tany UK, Brezila, Afrika Atsimo ary India.
Ny ahiahy manokana amin'izao fotoana izao dia ny karazana Delta. Ny Federasiona St. Kitts & Nevis dia hanohy hanara-maso ny toe-draharaha mandroso ary hanome fanavaozana mifanaraka amin'izany.
Ireo mpitsangatsangana dia tokony hanamarina tsy tapaka ny Md ny fizahan-tany Md ary Fahefana fizahan-tany Nevis tranokala ho an'ny fanavaozana sy vaovao.